စက်သုံးဆီမှောင်ခိုနှင့် အခွန်တိမ်းရှောင်မှုများ တိုင်ကြားစာ (USDP Member) | MoeMaKa Burmese News & Media
လျပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာန အဂတိလိုက်စားမှုများနှင့် အီးပီစီကလူသို့ သူ့အမြင်ကိုယ့်အမြင် ဖလှယ်ခြင်း
စက်သုံးဆီမှောင်ခိုနှင့် အခွန်တိမ်းရှောင်မှုများ တိုင်ကြားစာ
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဝင်တဦး၊ အောက်တိုဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၂
လက်ခံရရှိသော ပေးစာမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
ရက်စွဲ။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ( ၁၈ ) ရက်
အကြောင်းအရာ။ ။ စက်သုံးဆီများကို တရားမ၀င် မှောင်ခိုတင်သွင်း၍ အခွန်တိမ်းရှောင်မှုအား စုံစမ်းစစ်ဆေး နိုင်ပါရန်အတွက် ထပ်မံတင်ပြခြင်း။
ကျွန်တော်သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လအတွင်း၌ ကျော်စံကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ စက်သုံးဆီများကို တရားမ၀င်မှောင်ခိုတင်သွင်း၍ နိုင်ငံတော်နှင့်ပြည်သူလူထု ရသင့်ရထိုက်သောအခွန်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်းချီ၍ ရှောင်တိမ်းမှုအား တင်ပြခဲ့ပါသည်။
ယခုအခါတွင် လိုအပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ရာတွင် အထောက် အကူဖြစ်စေရေးအတွက် ထပ်မံသိရှိလေ့လာရသမျှ အကြောင်းအရာများအား ထပ်မံတင်ပြအပ်ပါသည်။
၄င်းကျော်စံကုမ္ပဏီသည် ယခင်စာတွင်ဖော်ပြခဲ့သော လိပ်စာပါရုံးခန်းအပြင် ကုန်ဈေးတန်းလမ်း၊ ကမ်းနားလမ်းနှင့်ကုန်သည်လမ်းကြားတွင်လည်း ရုံးခန်းဖွင့်၍ ၄င်း၏၀န်ထမ်းများအား အမည်ခံခိုင်း၍ “ကောင်းမိုး ကုမ္ပဏီလီမိတက်” နှင့် “မြခဲ ကုမ္ပဏီလီမိတက်” ဟူ၍လည်။ ထူထောင်၍ တရားမ၀င် စက်သုံးဆီရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းကို အင်အားကြီးမားစွာ လုပ်ကိုင်နေပါသည်။ ထို့အပြင် တရားမ၀င် တင်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်းကို ပြည်ပမှ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင်လည်း “UMG Co.LTD” အမည်ဖြင့် ၄င်။၏ညီအား ဦးစီးစေ၍ တည်ထောင်ထားပါသည်။ နိုင်ငံခြားတွင် ကုမ္ပဏီတည်ထောင် ထားခြင်းအားဖြင့် ၄င်းကုမ္ပဏီမှ စက်သုံးဆီများကို သင်္ဘောပေါ်တင်ပေးလိုက်သည့် ပမာဏအား လျော့ချ စာရင်းပြပြီး တရားမ၀င် ပိုမိုတင်ဆောင့်သည့် ပမာဏအား နိုင်ငံပြင်ပတွင် ငွေပေးချေခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်နိုင် ပါသည်။
၄င်းကုမ္ပဏီ၏ စက်သုံးဆီ တရားမ၀င် မှောင်ခိုတင်သွင်းမှုကို စစ်ဆေးမည် ဆိုပါက “ကျော်စံ၊ ကောင်းမိုး၊ မြခဲ” စသည့် ကုမ္ပဏီ (၃) ခု၏ စက်သုံးဆီတင်သွင်းခွင့် လျှောက်ထားမှု/ ခွင့်ပြုမှု၊ LC account ဖွင့်မှု မှတ်တမ်းများမှစတင်၍ စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ ၄င်းအချက်များပေါ်တွင် အခြေခံ၍ ၄င်းကုမ္ပဏီများ၏ စက်သုံးဆီများကို သယ်ဆောင်လာသည့် သင်္ဘော၏ အမြင့်ဆုံးကုန်သယ်ဆောင်နိုင်သည့် တန်ချိန်နှင့် ၄င်းတို့၏ ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် လျှောက်ထား/ခွင့်ပြုတင်သွင်းပမာဏတို့ နှိုင်းယှဉ် ကြည့်ပါက ခြားနားချက်ကုန်တန်ချိန်ပမာဏသည် ၄င်းတို့ပိုမိုတင်ဆောင်လာပြီး အခွန်ရှောင်တိမ်းသည့် ပမာဏ ဖြစ်ပါသည်။
ထိုသို့နှိုင်းယှဉ်ပြရခြင်းသည် မည့်သူမျှ တန် (၆၀၀၀) သင်္ဘောကို တန် (၃၀၀၀) ကုန်တင်ခဖြင့် တိုင်းခြား၊ ပြည်ခြားသို့ ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် တန် (၆၀၀၀) သင်္ဘောကို တန် (၆၀၀၀) ကုန်တင်ခ အပြည့်အ၀ပေးပြီး တန်ချိန် (၃၀၀၀) ကိုသာ တင်ဆောင်ခြင်းကို မဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်တွင်းသို့ ၀င်ရောက်လာသော နိုင်ငံခြားသင်္ဘောများ၏ ကုန်တင်ဆောင်နိုင်မှုများကို သက်ဆိုင်ရာ ဆိပ်ကမ်းများတွင် သိရှိနိုင်ပါသည်။
၄င်းကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်သည် စက်သုံးဆီတရားမ၀င်တင်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်းတွင် အတွေ့အကြုံများသူဖြစ်သည့်အတွက် သေချာစွာ စုံစမ်းစစ်ဆေးသင့်ပါသည်။ ၄င်း၏ တရားမ၀င်တင်သွင်းလာ သည့် စက်သုံးဆီများကို ဈေးကွက်အတွင်း ဈေးလျှော့ချရောင်းချမှုများကြောင့် တရားဝင် အခွန်ဆောင်တင်သွင်း သည့် ကုမ္ပဏီများ၏ ဈေးကွက်အတွင်းရောင်းအားကိုလည်း ထိခိုက်စေပါသည်။ ( ဥပမာအားဖြင့်- စီးပွားရေး ဦးပိုင်လီမိတက်၏ မြ၀တီ စက်သုံးဆီရောင်းဝယ်ရေးအနေဖြင့် မကြာခဏ ကြုံတွေ့ရပါသည်။ ) ၄င်းအခြေအနေ များကို မြန်မာနိုင်ငံ စက်သုံးဆီ လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ တာဝန်ရှိသူများလည်း သိရှိကြပါသည်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းသည် နိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်သူလူထုအတွက် အကျိုးရှိစေ မည့် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းမပြုပါက ၄င်းကုမ္ပဏီကဲ့သို့သော အဖွဲ့အစည်းများ ပေါ်ပေါက်လာစေရန် အားပေးသကဲ့သို့ ဖြစ်နေပါမည်။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်သူလူထု၏ အကျိုးစီးပွား ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သောအားဖြင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်သင့်ပါကြောင်း ထပ်မံတင်ပြအပ်ပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ တိုင်ကြားသူထက် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကို သိရှိထားရခြင်းက နိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်သူ လူထုအတွက် ပို၍ အကျိုးရှိပါသည်။
5 Responses to စက်သုံးဆီမှောင်ခိုနှင့် အခွန်တိမ်းရှောင်မှုများ တိုင်ကြားစာ (USDP Member)
မောင်ပျာလောင် on October 11, 2012 at 8:35 am
စားခွက်လုရင်း ထကိုက်ကြတယ်လို့ တော့ မဝေဖန်လိုက်ကြပါနှင့် ခင်ဗျာ၊ ပြည်-ခိုင်-ဖြိုးလည်း ကျင်နာတပ်တယ်လို့ ဝိုင်း အားပေးကြပါ။ ပြည်သူအတွက် ၀င်ငွေတွေပိုရလာတဲ့ အလုပ်တစ်ခုကိုကြိုဆိုကြပါ။ ပြည်-ခိုင်-ဖြိုးလည်း အသဲနဲ့ ပါလို့ ပြောပြီး၊ အမေ့ ရင်ခွင်မှာသားမိုက်တစ်ယောက် ပြန်လာတာကို ခွင့်မလွှတ်တဲ့ အမေမျိုးမရှိပါ။ အော် – ဒါနဲ့လမ်းတစ်ချမ်းခင်းကြီး အကြောင်းမကြားရတာကြာပါပြီလို့ ပြောတော့ – – – ဘယ်ဟုတ်ရမှာလည်း၊ ရန်ကုန်က အပြာရောင်လမ်းလေးမှာ ဖိုင်ကြားထုတ် နေတာ ငါကိုယ်တိုင်တွေ့ ခဲ့တယ်လို့ ပြန်ပြောတယ်ဗျာ၊ ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ –
မောင်ငြိမ်းချမ်း on October 11, 2012 at 4:44 pm
အော်တော်တော်လဲတရားကျဖို့ကောင်းတယ့်အဖွဲ့အစည်း . ပြည်-ခိုင်-ဖြိုး ပါတီဝင်တစ်ဦး ဆိုပဲ . သုတို့လုပ်၇ပ်တွေကြောင့်တိုင်းပြည် နုံခြာနေတာတော့မပြောဘူး . အင်းလေအမြတ်ကြီးစားဂုတ်သွေးစုတ်စီးပွားေ၇းလောက မုာတော့ဒါမျိုးတွေကမစန်းပါဘုးလေ
the mirror on October 12, 2012 at 9:49 am
that right,all right,so right,just right…………………,……….right,…….ko nyain chan
pyi chyo thar on October 12, 2012 at 10:12 am
မဟုတ်တာတော်တော်လုပ်တဲ့ ပြည် ခိုင် ဖြိူး
နိုင် ကြီး on October 12, 2012 at 1:10 pm
အများပြည်သူထက် ကိုယ်ကြိုးအတွက်ပိုမယ်ထင်တယ် စဉ်းစားကြည့် လေပိုသိလေပါ. ဪခိုးတဲ့သူကခိုး တိုင်တဲ့သူကတိုင်. တိုင်တဲ့သူကခိုး. ခိုးတဲ့သူကိုတိုင့့် တိုင်ခိုး.့့ခိုးတိုင်. ခိုးတိုင်. တိုင်ခိုးပြည် ခိုင် ဖြိုး ပါပဲ